खुशीले शारीरिक सम्बन्ध, अनि बलात्कार भन्दै दलित युवालाई फसाउने महिलालाई सजाय हुँदैन ? — OnlineDabali
खुशीले शारीरिक सम्बन्ध, अनि बलात्कार भन्दै दलित युवालाई फसाउने महिलालाई सजाय हुँदैन ?
Posted on May 5, 2018 by अनलाइन डबली
काठमाडौँ । सामाजिक अभियान्त सरु सुनारले मन मिल्दासम्म शारीरिक सम्बन्ध राख्ने तर केही समस्या आएपछि बलात्कार भनेर झुटो आरोप लगाने महिलालाई पनि सजय हुनुपर्ने बताएकी छन् । उनले महिलाको झुटो आरोपकै कारण धेरै परुषहरु जेलमा भएको बताइन् ।
“बलात्कार गर्यो र गर्न खोज्यो भन्दैमा पुरुष पक्राउ गरिन्छ भने मन पर्दासम्म सम्बन्ध राख्ने अनि रिस उठेसी मलाई बलात्कार गर्यो भनी झुटो आरोप लगाउने नारिलाइ के हुन्छ सजाय ?”सरुको प्रश्न छ । मन पर्दासम्म होटल वा एकान्त ठाउँमा गएर राजी खुशीले शारीरिक सम्बन्ध राख्ने तर मन मिल्न छोडेमा जबरजस्ती गर्यो भन्दै बलात्कार मुद्दा दर्ता गर्ने प्रवृति महिलाहरुमा बढ्दै गएको सुरुको दाबी छ ।
दलित अगुवा सरुले यो समस्या दलित युवा र गैर दलित महिलामा बढी रहेको बताउँछन् । उनले गैर दलित युवतीले पहिला खुशीले प्रेम गर्ने, विवाह गर्ने तर केही समस्या आएपछि जबरजस्ती गर्यो, जात ढाट्यो, बलात्कार गर्यो भन्दै दलित युवाहरुलाई सफाउने गरेको बताइन् ।
“गैरदलित केटीले पहिला दलित युवासँग राजीखुसी प्रेम गर्ने, विवाहा गर्ने अनि घर परिवारले थाहा पाएपछि अस्वीकार गर्दै धम्काएसी जबर्जस्ती मलाई जात ढाट्यो थाहै नपाइ बलात्कार गर्यो भनी बिचरा सिदा दलित युवालाई फसाउने काम भइरहेको छ, यस्ता महिलाहरुलाई के कारवाही हुँदैन ? महिलाहरु भन्दैमा जे गर्न पनि छुट हुन्छ ?” उनले बास्तवमै बलात्कृत भएका महिलाहरुले न्याय नपाएको समेत बताएकी छन् ।
दलित युवासँग गैर दलित युवतीले गरेको अधिकांश विवाह बलात्कार मुद्दामा परिणत भएका सुरुको दाबी छ ।
चुनाव सकियो, अब सबै मिलेर फुटबलको विकास गरौंः नवनिर्वाचित अध्यक्ष कर्माछिरिङ
अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य शाह रिहा